Horudhac: Liverpool vs Crystal Palace… (Red oo maanta fursad u heysata inay barbarreyso rikoor Tottenham ay ka heysato Eagles iyo Mane oo…) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 18, 2021 at 09:04 Horudhac: Liverpool vs Crystal Palace… (Red oo maanta fursad u heysata inay barbarreyso rikoor Tottenham ay ka heysato Eagles iyo Mane oo…)2021-09-18T09:04:55+02:00 CAYAARAHA
(Liverpool) 18 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyneysa galabta naadiga Crystal Palace ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League.
Reds ayaa hannaan wacan ku bilaabatay horyaalka xilli ciyaareedkan iyadoo guul gaartay saddex ka mid ah afartii ciyaar ee ugu horreysay horyaalka halka ay barbarro gashay midka kale.
Liverpool ayaa weyneysa weeraryahankeeda Roberto Firmino kaasoo kulankii saddexaad oo xiriir ah ku seegaya dhaawac, waxaase la filayaa inuu toddobaadkan qaybihii dambe kusoo laabto tababark, halka Jordan Henderson la filayo inuu qaato booska Harvey Elliott kaasoo qaliin anqowga ah maray.
Dhinaca kale, Crystal Palace saxiixyadeeda cusub ee kala ah Odsonne Edouard, Michael Olise iyo Will Hughes ayaa dhammaantood sugaya maanta inay kusoo bilawdaan ciyaartooda ugu horreysa ee kooxda ka dhisan London.
Liverpool ayaa haatan garaacday Crystal Palace siddeeddii is arag ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League iyadoo dhalisay 24 gool halka laga dhaliyay shan gool oo qura.
Kooxda lagu naaneyso The Eagles ayaa barbarreyn karta rikoorkeedii ugu dheeraa ee guuldarrooyin xiriir kaga soo gaara Premier League hal naadi iyadoo horraan sagaal guuldarro oo xiriir ah kagala kulantay Tottenham intii u dhexeysay 2015 illaa 2019.
Palace ayaa guuldarro la kulantay dhammaan afartii booqasho ee ugu dambeysay horyaalka ee ay u safartay Anfield halka saddex safar oo ka horreeyay afartaan ay guuleysatay dhammaantood.
Liverpool ayaa haatan guuldarro la’aan ah 14-kii ciyaar ee ugu dambeysay horyaalka iyadoo heysata rikoorka guuldarro la’aanta ugu dheer xiligan ee dhammaan kooxaha afarta heer ee ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska.
Reds ayaa noqotay naadigii ugu horreeyay tan iyo Chelsea sanadkii 2009 ee 100 darbo la beegsata goolka kooxaha kasoo horjeeda afarta ciyaar ee ugu horreysa horyaalka.
Sadio Mane ayaa noqon kara xiddigii ugu horreeyay Premier League ee sagaal kulan oo xiriir ah gool ka dhaliya hal naadi halka uu raadinayo goolkiisii 100 ee Liverpool uu u dhaliyo dhammaan tartammada.
Mohamed Salah ayaa isaguna raadinaya labo gool si uu u gaaro 100 gool oo Premier League ah inuu Liverpool u dhaliyo, haatan 100-kiisa gool ee horyaalka waxaa ku jira labo uu u dhaliyay Chelsea.
Palace ayaa kulankii lasoo dhaafay 3-0 ku garaacday Tottenham iyadoo gaartay guusheedii ugu horreysay fasalkan, waxaana kulanka maanta uu noqonayaa markii ugu horreysay ee ay horyaalka ku wajado koox aanan ka dhisneyn London xilli ciyaareedkan 2021-22.
Christian Benteke ayaa shan gool ku dhaliyay Anfield isagoo la safan kooxda martida ah ciyaaraha horyaalka, waxaana uu hal gool dheeryahay goolashii Premier League uu Liverpool ugu dhaliyay garoonkan intii uu ka tirsanaa.
Ciyaarta maanta ayaa Wilfred Zaha u noqoneysa tii 250-aad ee uu safto Premier League.
« Maxaa kasoo kordhay doorashada HirShabelle ee Aqalka Sare?
Farmaajo Oo Keligii Shiraya!! »